संक्षिप्त परिचय : इलाम जि.स.स
Monday September 16, 2019 | समय
स्वीकृत योजनाको विवरण सम्वन्धमा २०७५/०७६ ईलाम जिल्लामा स्थानीय पुर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरुको बिवरण २०७५ इलाम जिल्लाको प्रोफायल विवरण इलाम जिल्लाको दोस्रो जिल्ला सभा सम्पन्न २०७५।०६।११ जिल्ला समन्वय समितिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४/२०७५ आ.व.०७५।०७६ को जिल्ला निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्वन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना जि‍.स.स. कार्यालयबाट यही २०७५ जेष्ठमा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय निकायका जननिर्वाचित पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुको लागी क्षमता अभिवृद्धि तालीमको प्रस्तावित तालिका जिल्ला समन्वय समिति इलाम बोर्ड बैठक बसेकव संक्षिप्त निर्णयहरु विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्वन्धमा । कर्मचारीहरुकाे विवरण सम्वन्धी सूचना
हिजो पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्रको मेची अञ्चलका चार जिल्लामध्येको एक पहाडी जिल्ला इलाम । हाल १ नम्वर प्रदेशका १४ जिल्ला मध्ये पर्दछ । इलामको पुरानो नाम खलङ्गा भएको केही प्राचीन लेखहरूमा उल्लेख छ । इलामको नामाकरणको सम्वन्धमा एतिहासिक, भौगोलिक, प्राकृतिक मानव शास्त्रीय आदि दृष्टिकोणले अध्ययन हुन बाँकी नै छ । तर पनि यसको नामाकरणका सम्वन्धमा निम्न अनुमानहरु लगाउने गरिन्छ ।
इश्वीको १३०० वर्ष अघि पर्सिया (हालको इरान) का इलाम बंशी राजाले दक्षिण पश्चिम पर्सियाका काशी बंशी राजालार्इ बिजय गरी सदाकालागि देश निकाला गरे र तिनीहरु पूर्वतर्फ लागे । तिनै मानिसहरु याहाँ आई बसोबास गरे र आफ्नो जन्मभूमिको सम्मानमा यो ठाउँको नामपनि इलाम राखे ।
इलामको अर्थ लेप्चा भाषामा पुत्का (एक प्रकारको मौरी) को मह हुन्छ, भने लिम्बु भाषामा घुमाउरो बाटो हुन्छ ।
प्राचिन शास्त्रीय मत अनुसार राजा सरियातिले पुत्र प्राप्तिका लाlग हालको माईपोखरीमा पुत्रेष्ठि यज्ञ गरे । उनकी पत्नि छोराको सट्टा छोरी चाहन्थिन र यज्ञ गर्ने ब्राम्हणलाई खुसुक्क छोरी जन्मने यज्ञ गरिदिन आग्रह गरिन । ब्राम्हणहरुले पनि रानीको आग्रह अनुरुप छोरी जन्मने यज्ञ गरिदिए र छोरी (इला) जन्मिन । छोरी जन्मेको देखेर राजा सरियाती इलामा (इला-छोरी र मा चाहिदैन) इलामा भन्न थाले । यही इलामा पछि इलाम भयो भन्ने पनि भनाईछ ।
नेपाल एकिकरण पूर्व दश लिम्वुवानको एक अंग स्वशासित प्रशासनमा रहेको थियो । यसक्षेत्रको सदरमुकाम नागरिगढीमा थियो । सुगौली सन्धिपछी २ वर्ष करफोक (लाप्चा भाषामा ढुकुर बस्नेठाउँ) मा वसेपछि विक्रम सम्वत १८७५ मा सदरमुकाम इलामडाँडामा सारियो । त्यसैले यो एकीरणकै समयदेखिको पुरानो सदरमुकाम कायम रहिरहेको जिल्ला पनि हो । नागरिगढीका पहिलो सुब्बा (प्रशासकीय प्रमुख) जयन्त खत्रीले नै सदरमुकाम करफोक हुदै इलाम डाँडामा सारेका थिए ।
महाभारत र शिवालिक पर्वत शृङ्खलाको पूर्वदक्षिण काखमा अवस्थित नेपालको सुदूरपूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम वास्तवमै प्राकृतिक दृष्टिले रमणीय छ । यहाँको चियाबारी, हरियाली, सानाठूला नदीनाला, पोखरी, मठमन्दिर, पर्वतीय शिखरहरु (श्री अन्तु, सन्दकपूर, सिध्दिथुम्का आदि) तथा अन्य प्राकृतिक सुन्दरता आदिले पर्यटकलाई आकर्षण गरिरहेका छन् । प्रकृतिको वरदानको रुपमा रहेको यहाँको उर्वर भूमि एवम् पौरखी कृषकहरूको अथक मेहनतले गर्दा यो जिल्ला कृषि उत्पादनमा अग्रणी मानिन्छ । सांस्कृतिक, र प्राकृतिक पक्षहरूमा समृद्ध यो जिल्ला ‘’पूर्वी पहाडकी रानी”, नगदेबालीको खानी’जस्ता उपनामले चिनिन्छ । इलाम जिल्लालाई विभिन्न ‘अ’ (हाल आठ) ‘अ’ को जिल्ला भनेर चिनिने गरेको छ । ‘अ’ को अर्थ अलैंची, अदुवा, अर्थोडक्स चिया, अकबरे खुर्सानी, ओलन, अम्रिसो, आलु र आतिथ्यले परिभाषित गरिन्छ । हाल किवि फलको उत्पादन पनि बढिरहेको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत झापाको चारआलीबाट मेची राजमार्गमा ७८ किलोमिटरको दूरी पार गरेपछि इलाम सदरमुकाम पुगिन्छ । भारतको दार्जिलिङसँग सीमा जोडिएको इलाममा हल्का भिराला पहाड, ससाना थुम्काथुम्कीमा देखिएको हरियाली एवं स्वच्छ हावापानीबाट पर्यटकहरू आकर्षित हुने गर्छन् । मनै लोभ्याउने प्राकृतिक सौन्दर्य नै यहाँको प्रमुख आकर्षण मानिन्छ । सन्दकपुर, छिन्तापु, श्रीअन्तु, सिद्धिथुम्काजस्ता रमणीय पहाडहरू यस जिल्लामा रहेका छन् । जहाँ सयौं प्रजातिका चराहरू तथा विश्वकै दुर्लभ मानिएका रेड पाण्डा, दुम्सी, सालक लगायतका जनावरहरू पाइन्छ । यहाँका ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बा, मन्दिर तथा लोपोन्मुख लाप्चा जातिका साथै राई, लिम्बु लगायतका अन्य जातजातिको संस्कृति नै इलामको सांस्कृतिक आकर्षण र पहिचान हो । विभिन्न जातजातिको आवासभूमि इलाम सांस्कृतिक रूपले अनेकतामा एकताको थलोका रूपमा पनि चिनिन्छ । लाप्चा, लिम्बू, राई, तामाङ, गुरूङ, शेर्पा, क्षेत्री, ब्राह्मण, नेवार आदि सम्प्रदायका मानिस यस जिल्लामा बसोबास गर्छन् । धान नाच, च्याब्रुङ, चण्डी नाच, मारुनी नाच, बालन, सगिँनी, डम्फु नाच आदि यहाँका जातीय सांस्कृतिक परम्परा हुन् ।
कृषि तथा पशुपालन इलामको मुख्य पेशा भए पनि व्यापारले पनि महत्वपूर्ण स्थान लिएको छ । इलाम बजार, बिब्ल्याँटे, फिक्कल, पशुपतिनगर, नयाँबजार, मङ्गलबारे, देउराली, शुक्रबारे, तीनघरे यहाँका मुख्य व्यापारिक केन्द्र हुन् । इलाम बजार जिल्ला सदरमुकाम हो, जुन राजधानीदेखि करीब ८ सय ५० किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ । चिया, अलैंची, अदुवा, आलु, अम्रिसो, अकबरे खुर्सानी, स्कुस, दूध किवी आदि यहाँका मुख्य कृषि पैदावर हुन् । इलाममा हाल एक दर्जनभन्दा बढी ठूला चिया प्रशोधन कारखाना रहेका छन् । यसका अतिरिक्त पशुपालन खासगरी गाईपालन पनि इलाममा फस्टाएको पेशा हो ।
इलामका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू :
लाप्चा भाषामा अन्तुको अर्थ अग्लो डाडाँ भन्ने हुन्छ । अन्तुडाँडा इलामको एक पर्यटकीय गन्तव्य हो । श्रीअन्तु नामले यसलाई चिनिए पनि बिगतमा समाल्बुङ र श्रीअन्तु गाविसको बीचमा पर्ने यो स्थान हाल सूर्योदय नगरपालकीकामा पर्दछ । यो समुद्री सतहबाट २ हजार ३ सय मिटर उचाइमा अवस्थित छ । अन्तु सूर्योदयको दृश्यावलोकनका लागि प्रसिद्ध छ । मेची राजमार्गमा पर्ने फिक्कल बाट १७ कि.मी. र नेपालको एक पूर्वी नाका पशुपतिनगरबाट २२ कि.मि को दुरीमा यो डाँडा रहेको छ । विसं ०४३ मा यसलाई दीपेन्द्र शिखरको नामकरण गरिएको भए पनि यो श्रीअन्तु वा अन्तुडाँडाबाट प्रसिद्ध छ ।
माइखोला र जोगमाईको सङ्गमस्थललाई माइबेनी नामले चिनिन्छ । बिगतमा नाम्सालिङ गाविस र इलाम नगरपालिकाको सिमाना स्थान रहेको यो स्थान अहिले इलाम नगरपालिकामा पर्दछ । हरेक वर्ष माघ १, २ र ३ गते त्यहाँ मेला लाग्ने गर्छ । यो यस क्षेत्रकै महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हो । माईबेनी इलाम बजारबाट करीब तीन किलोमिटर पूर्व पर्छ यहाँ बडाहाकिमहरु इन्दु शमशेर, रघुवीर बुढाथोकी र टङ्कनाथ बाँस्तोलाको सक्रियतामा निर्मित शिव मन्दिर पनि रहेको छ ।
विगतको माईपोखरी र सुलुबुङ गाविसको सिमानामा र हाल सन्दकपूर गाउँपालिकामा पर्ने इलामकै महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थल माईपोखरी हो । माइपोखरी इलाम सदरमुकाम देखि १५ कि.मि. को दुरीमा रहेको प्रर्वतीय सिमसार हो । यो २७0०० ‘०४” उतरी अक्षांस र २७0 ००’ ४३” देखी ८७०५६ ‘१४” पूर्वि देशान्तर सम्म फैलिएको छ । नौओटा कुना भएको पोखरी निकै आकर्षक छ । यो तारा आकृतिको छ । १ दशमलव ८८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस पोखरीको अर्धव्यास ७ सय ५० मिटर छ । यो क्षेत्र जैविक विविधताका दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । यो क्षेत्र हिन्दु, बौध्द तथा किरात धर्मावलम्वीहरुको साँस्कृतिक सगमस्थलको रुपमा पनि रहेको छ । विश्वमै मह्त्वपूर्ण कञ्चनजंघा भू–परिधि क्षेत्रको दीगो संरक्षण गर्न अत्यावश्यक जैविक मार्गको भूमिका निर्वाह गर्ने तथा विभिन्न रैथाने संकटापन्न र दुर्लभ जीबजन्तुहरु रहेको माईपोखरी क्षेत्रको ९० हेक्टर क्षेत्रफल (सन) २८ अक्टोवर २००८ मा विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचिकृत भएको छ । यो रामसार क्षेत्र २०८० मिटर देखी २१६४ मिटर उचाइमा अवस्थित छ । यहाको तापक्रम क्रमश: गर्मीमा अधिकतम १८० सेल्सियस र जडोमा न्यूनतम २० सेल्सियसको वीचमा रहने गर्दछ । औषत वार्षिक वर्षा ३००० मी.मी भन्दा वढी हुने गर्दछ । उपोष्ण र समसितोषण हावा पानीको संगमस्थल माइपोखरी कञ्चनजंघा भू–परिधि (Landscape Complex) को मध्य भागमा अवस्थित रहेको छ । अत्यन्त मनमोहक जङ्गलले घेरिएको यो स्थानमा विसं १९५४ मा स्वामी सोमेश्वरानन्दले निर्माण गराएको शिव मन्दिर पनि रहेको छ । माईपोखरीसँगै जोडिएको छिन्तापु चुचुरोको उचाइ ३ हजार २ सय मिटर छ, जसले महाभारत पर्वत श्रेणी र शिवालिक पर्वतश्रेणीलाई छुट्ट्याउँछ । यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका लालीगुराँस तथा पुतलीहरू पाइन्छन् । त्यस्तै विश्वमै दुर्लभ मानिएको जीव ठकठके (पानीगोहोरो) तथा पोखरीमा पाइने गलैंचे झ्याउ पनि यहाँ देख्न सकिन्छ । माईपोखरीमा कहिलेकाहीँ आउने छाललाई स्थानीय वासीले अनिष्टको सङ्केतका रूपमा लिने गर्छन् ।
सन्दकपुर गाउँपालिकामा माई पोखरी संगै जोडिएर रहेको यसको उचाई ३२०० मिटर रहेको छ । यसले महाभारत पर्वत श्रृखला र शिवालिक पर्वत श्रेणीलार्इ छुटयाउएको छ ।
इलाम जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने जिल्लाकै उच्च चुचुरो हो । यसको उचाइ समुद्री सतहबाट ३ हजार ६ सय ३६ मिटर रहेको छ । यहाँबाट विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित कञ्चन जंघा र भूटानसम्मका हिमशृङ्खलाहरू देख्न सकिन्छ । सूर्योदय, सूर्यास्त तथा कञ्चनजङ्घाको मनमोहक दृश्य यहाँबाट देख्न सकिन्छ । विभिन्न रङमा फुल्ने लालीगुराँस फूलका साथै अनेकौं प्रकारका स्थानीय जङ्गली फूलहरूले सन्दकपुरलाई सजाएको छ । यो नेपाल र भारतको सिमाना नजिकमा पर्छ । सन्दकपुर घुम्न नेपाल, भारतसहित तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू आउने गर्छन् । इलाम सदरमुकामबाट माईपोखरी, माईमझुवा हुँदै करीब ३० किलोमिटर सडक पार गरेपछि सन्दकपुर पुगिन्छ । त्यस्तै फिक्कलबजार बाट पनि नयाँबजार हुँदै ४५ कि.मि.को दुरीमा सन्दकपुर पुग्न सकिन्छ । यो सन्दकपूर नै माइखोलाको उद्गम स्थल पनि हो ।
समुद्री सतहबाट २ हजार १ सय मिटर उचाइमा रहेको सिद्धिथुम्का सदरमुकामबाट पश्चिममा पर्छ । यहाँबाट सूर्योदय, सूर्यास्त तथा चुरे र महाभारत शृङ्खला, तराईका विभिन्न फाँटको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँ पुग्न सदरमुकामबाट करिव १७ कि.मि को यात्रा तय गर्नुपर्छ ।
समुद्री सतहबाट २ हजार मिटरको उचाइमा अवस्थित माङमालुङ धार्मिक महत्व बोकेको स्थल हो । बाँझो र इभाङको बीचमा माङसेवुङ गाउँपालिकामा पर्ने यो स्थान किराँत धर्मावलम्बीहरूको एक पवित्र स्थल पनि हो । यस ठाउँलाई औतारी डाँडो भनेर पनि चिनिन्छ । यहाँ सिंह, सर्प, चिल आदि जीवजन्तुहरूको ढुङ्गाले बनेका मूर्ति तथा विभिन्न चित्र प्रशस्त छन् । मात्रिका किराँतेश्वरको गुफा यहाँको महत्वपूर्ण धार्मिक सम्पदा हो । यो जंगलभित्र शिवपार्वतीको विवाहको अवसरका दृस्य झलकाउने ढुङगाका जीवन्त र प्राकृतिक आकृतिहरु रहेका छन् । बेहुला बनेका शिव र उनको साथी (लोकेन्द्रे) अनी बेहुली वनेकी पार्वती र उनकी साथी (लोकन्द्री) मानिने मूर्तिहरु, शिवपार्वतीले खाना पकाउन वनाएको ढुङगाको चम्का (चुलो) सिहं आकृतिको प्राकृतिक ढुङगाको मूर्ति, शिव पार्वतीको कृडास्थल गुफा लगायतका विचित्र लाग्ने प्राकृतिक दृस्यहरु रहेका छन् । त्यस्तै एउटा विशाल ढुंङगा माथी अर्को विशाल ढुङगा रहेको छ । जसलाई सामान्य बलको प्रयोगबाट लरक्क हल्लाउन सकिन्छ । तर ढलाउन / लडाउन भने सकिदैन । एउटा १ फिट जति गोलाईको प्वाल रहेको छ । त्यहाँबाट जाडो महिनामा तातो वाफ निस्क्न्छ र त्यसमाथी हात राख्न सकिदैन भनिन्छ । यि विषय वैज्ञानिक दष्टिकोणले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक र उपयूक्त जस्तो लाग्दछ । इलाम सदरमुकामबाट र झापाको दमक तथा पाँचथरको रवि हुँदै पनि माङमालुङ जान सकिन्छ ।
देउमाई खोलाको किनारमा रहेको गजुरमुखी देवीको मन्दिर समुद्री सतहबाट ७ सय मिटरको उचाइमा रहेको छ । यो पनि अर्को धार्मिक महत्व बोकेको स्थल हो । यहाँ कात्तिक पूर्णिमाको दिन ठूलो धार्मिक मेला लाग्छ । गजुरमुखी इलामबाट नेपालटार, मङ्गलवारे बजार हुँदै करीब ४१.५ कि.मि को दूरीमा पुग्न सकिन्छ ।
समुद्री सतहबाट १ हजार ८ सय मिटरको उचाइमा अवस्थित पाथीभरा धार्मिक महत्व बोकेको स्थल हो । यो पूर्वी इलामको साविक कोल्बुङ गाविस हाल रोङ गाउँपालिकामा पर्छ । कुटीडाँडा र हाँसपोखरीको चुचुरोमा पर्ने यस ठाउँमा मन्दिर बनाइएको छ । मेची राजमार्गको कुटीडाँडाबाट करीब २० मिनेट सिँढी खुट्किला उक्लेपछि पाथीभरा देवीको मन्दिरमा पुग्न सकिन्छ । यी देवीलाई ताप्लेजुङकी प्रसिद्ध पाथीभरा देवीकी बहिनीका रूपमा पुजिन्छ । कसैकसैले यिनलाई सानी पाथीभरा देवी पनि भन्छन् । विभिन्न अध्ययनले यहाँ प्याराग्लाइडिङको उच्च सम्भावना रहेको देखाएका छन् ।
यो स्थान इलाम बजारमै छ । यहाँ भगवान् शिव, सन्तोषी माता र नारायणको मन्दिर छ । यो मन्दिर शिक्षाको प्रचार प्रसारका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । यो मन्दिर भवानीदास राजलवटव्दारा विसं १९२२ मा निर्माण गरिएको हो ।
इलाम बजारको नजिकै प्रसिद्ध भगवतीको मन्दिर रहेको छ । यस स्थानमा नियमित पूजापाठ हुनुका साथै पुराणहरू पनि लगाउने चलन छ । यो स्थानलाई खलङ्गा खाल्डो र मन्दिर अगाडिको ढुङ्गालाई इलङ्गा ढुङ्गा भनिन्छ । मन्दिर नजिकै गणेश, डङ्किनी र सिंहवाहिनीका ससाना मन्दिर पनि रहेका छन् ।
इलाम नगरपालिकाको साविक वडा नम्बर– ९ हाल वडा नं. ६ को यो मन्दिर पुवाखोलाबाट २ सय मिटर माथिको पहरामा छ । पहराभित्र रहेको विशाल ढुङ्गालाई देवीका रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ ।
गणेश प्रसाद बराल
विजय कुमार कार्की
© 2019 Copyright इलाम जि.स.स.